Bari (Gobol) - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Gobolka Bari)
Gobol in SomaliaTemplate:SHORTDESC:Gobol in Somalia
Tirokoobkii (Qiyaas) UNka ee 2008 waxa uu dadka deggan gobolka Bari ku qiyaasay 1,300,000 oo ruux oo dhalasho ahaan Soomaali wada ah. Dadka gobolka dega waxaa loo yaqaan Reer Bari. Qaybta maamul ee rasmiga ah ee Soomaaliya, gobolka Bari waxay ka kooban yihiin lix degmo oo soo socda:  degmada Alula, degmada Bandarbayla, degmada Boosaaso (oo ah degmada uguweyn ahna magaalo madaxda gobolka), Degmada Iskushuban, Degmada Qandala iyo Degmada Qardho.
Sanadkii 1998, Bari wuxuu qayb ka ahaa Puntland, oo ah gobol madax-bannaan oo waqooyi-bari Soomaaliya. Dastuurka ku meel-gaarka ah ee Dawladda Puntland ee 2001-dii, dhulka Puntland waxaa lagu qeexay gobollada rasmiga ah ee Soomaaliya. Gobolka Bari wuxuu xubin ka yahay Sideed iyo Tobanka (18) gobol ee Dalka.
Sannado kaddib, Puntland ayaa dhistay gobolka "Karkaar", kaa oo dhul ahaan laga jaray gobolka Bari. Gobolka Karkaar waxaa Magaalo madax looga dhigay, magaalada Qardho oo ka mid ahayd degmooyinka gobolka Bari. Degmooyinka cusub ee gobolka karkaar ayaa kala ahb(5 degmo): Qardho (degmo hore ee gobolka Bari), Bandar-bayla(degmo hore ee gobolka Bari), Waaciye, Rako iyo Xaafuun. Gobolka Bari waxaa lagu kordhiyay saddex(3) degmo oo cusub (Baargaal,Carmo iyo Ufayn).
Muddo kaddib waxaa hadana gobolka bari laga gooyay gobol labaad oo cusub, laguna magacaabay "Gaardaafuu" magaalo madaxdiisuna tahay "Caluule (Caluula)" taas oo ka mid ahayd degmooyinkii hore ee gobolka Bari. Marka Caluule/Caluula laga tago gobolkan cusub ayaa degmooyin looga dhigay: Baargaal, Bareeda, Gunbax iyo Murcanyo. (juun 2013) kalfadhigii 30-aad ee baarlamaanka Puntland ayaa gobolka Gardafuu si rasmiya loogu ansixiyay.
Degmooyinka[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Gobolka Bari (Somalia) waxa uu ka kooban yahay lix degmo.
Dowladda Puntland waxa ay maamul ahaan u sii kala qaybisay gobolka Bari saddex qaybood oo kala ah Karkaar oo ka kooban degmooyinka , Waaciye, Bayla, Rako iyo Xaafuun; Bari oo ka kooban degmooyinka Boosaaso, Iskushuban, Qandala, Carmo iyo Ufayn. iyo Gardafuul oo ka kooban Caluula, Baargaal, Bareeda, Murcanyo iyo Gumbax.
↑ (PDF) http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/121024_Administrative_Map_Bari_A4.pdf. Soo qaatay 30 Diseembar 2013. Hubi qiimaynta taariikhda: |access-date= (caawin); Maqan ama ebar |title= (caawin)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Bari_(Gobol)&oldid=225720"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 4 Diseembar 2021, marka ee eheed 14:40.